VJ Piping, Hank Hydrogen Storage Hank, Hank Hileum Storage - Quduus
Vacuum dahaaran Taxanaha tuuboyinka
Vacuum dahaaran Taxanaha tubbada debecsan
Nidaamka Bamka Vacuum Dynamic
Vacuum dahaaran Taxanaha Madax
Vacuum dahaaran Phase SEPARATOR Phase
Qalabka Taakulaynta Nidaamka Tuubbada
Kiisaska & Kala-goynta Hawada Hawada
Kiisaska & Xalalka Warshadaha Injineernimada Elektiroonigga ah
Semiconductor iyo Kiisaska Chip & Xalalka
Xaaladaha Hawada & Xalka
Gawaarida Gawaarida iyo Xaaladaha & Xalalka Warshadaha Gawaarida
Kiisaska & Xalalka Warshadaha Biopharmaceutical
Xaaladaha & Xalalka Warshadaha Cuntada & Cabitaanka
Kiisaska & Xalalka Gaaska Dabiiciga ah ee Liquefied (LNG)
Maamulka & Heerka
Rakibaadda & Boostada kadib
Vacuum dahaaran Qaybta Wajiga
Adduunkan maanta sida xawliga ah isu beddelaya, waa hawl culus in macaamiisha la siiyo tikniyoolajiyad horumarsan & xallin iyadoo la gaarayo kayd qiimo leh. U oggolow macaamiisheennu inay faa'iidooyin badan oo tartan ah ka helaan suuqa.
Kiisaska & Xalka
Qalabka HL Cryogenic kaas oo la aasaasay sanadkii 1992 waa summad ku xidhan Chengdu Holy Cryogenic Qalabka Qalabka Co., Ltd.. HL Cryogenic Qalabka waxaa ka go'an naqshadeynta iyo soo saarista Nidaamka Tuubada Cufan ee Feejignaanta Sare ee Qalabka iyo Qalabka Taageerada ee la xiriira si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha. Faleebada Vacuum-ka Dahaarka ah iyo Flexible tubbo waxaa lagu dhisay hawo sare iyo lakab fara badan oo shaashadaysan qalab gaar ah oo dahaaran, waxayna sii maraysaa taxane aad u adag oo farsamooyin farsamo iyo daaweyn hawo sare leh, oo loo isticmaalo wareejinta oksijiinta dareeraha ah, nitrogen dareere ah. , dareere argon ..
Su'aalaha La Weydiiyo Maamulka & Heerka Xirxirida Seaworthy Rakibaadda & Boostada kadib
Laga soo bilaabo 1992, HL Cryogenic Qalabka waxaa ka go'an in la naqshadeeyo lana soo saaro Nidaamka Dhuumaha Burbursan ee Sare ee Vacuum dahaaran iyo Qalabka Taageerada Cryogenic ee la xiriira si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha.
HL Cryogenic Qalabka wuxuu ku hawlanaa warshadaha codsiyada cryogenic 30 sano. Iyada oo loo marayo tiro badan oo iskaashi mashruuc caalami ah, HL Cryogenic Qalabka ayaa aasaasay xirmo Heerarka Ganacsiga iyo Nidaamka Maareynta Tayada Ganacsiga iyadoo lagu saleynayo heerarka caalamiga ah ee Nidaamka Dhuumaha Burburka Qaswada Vacuum.
Tuubada gudaha ee VIP waxaa marka hore sifeeya taageere awood sare leh> Waxaa ku sifeeya nitrogen qalalan oo nadiif ah> Waxaa lagu nadiifiyey buraashka tuubada> Waxaa lagu sifeeyaa nitrogen qallalan oo qallalan> Ka dib nadiifinta ka dib, si deg deg ah ugu xir labada dhinac ee tuubbada daboollo caag ah oo xaji xaaladda buuxinta nitrogen-ka.
HL waxay ballanqaadaysaa inay kaga jawaabto dhammaan weydiimaha 24 saacadood gudahood. HL waxay leedahay amarro aad u tiro badan sannad kasta waxaana jira tiro ku filan oo socodsiinta dhammaan noocyada qalabka dayactirka oo la geyn karo sida ugu dhakhsaha badan.
Xaaladda Biyaha ee Qaboojinta Biyaha ee Vacuu ...
Kaydinta unugyada unugyada 'Stem Cell Cryogenic'
Mashruuca Chip MBE oo Lagu Dhameeyay Pas ...
Telefoonka: +86 28-85370666
Cinwaanka: No.8, East, 1st, Wuke road, Wuhou Hi-Tech Zone, Chengdu, Shiinaha
Haanta Kaydinta dareeraha ee loo yaqaan 'Cryogenic Liquid Keydka', Nalalka Vacuum, Tuubada Vj, Vacuum dahaaran tuuboyinka, Bangiga Organoid, Dual Wall tuuboyinka tuuboyinka,